विवाह अघि नै बच्चा जन्माउने परम्परा ! - Rastra Daily
विवाह अघि नै बच्चा जन्माउने परम्परा !
नेपाली समाजमा विवाहपूर्व सन्तान जन्माउनु राम्रो मानिदैन । यसरी सन्तान जन्माउनुलाई सामाजिक रुपमा बदनामीको उपमा दिइन्छ ।
तर विश्वमा एउटा यस्तो स्थान पनि छ जहाँ विवाहपूर्व सन्तान जन्माउने परम्परा छ । र यसो गर्नुलाई शुभ मानिन्छ ।
विवाहपूर्व सन्तान जन्माउने परम्परा अन्य कुनै देशमा नभएर हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको राजस्थानको सिरोहि र पालीमा रहेको छ ।
यहाँ विहे अघि सन्तान जन्माउनु वैध छ । साथै विहे अघि नै जन्मिएका बच्चालाई शुभ मानिन्छ । यतिमात्र होइन, बिहे अघि बच्चा जन्माउन नसके यसलाई अपशकुन मानिन्छ ।
राजस्थानको उदयपुरस्थित सिरोही र पालीमा रहने गरासिया जनजातिमा यो परम्परा १ हजार बर्षअघि बाट चलि आएको छ ।
यो परम्परा हालैको केहि बर्ष यता विश्वमा देखिएको लिव इन रिलेशनशिपको प्राचिन स्वरुप रहेको छ । जहाँ गरासियाका जनजातिका उमेर पुगेका केटा केटीले स्वेच्छाले लिव इन रिलेशनशिपमा रहने र बच्चा जन्मिएपछि मात्र एकअर्कासंग विवाह गर्ने परम्परा छ ।
गरासिया जनजातिमा २ दिनको विवाहको विशेष मेला लाग्दछ ।
यस मेलामा केटा केटीले एक अर्कालाई मन पराउने र बिना विवाह एक साथ रहन थाल्दछन् । यसका साथै बच्चा जन्मिएपछि मात्र इच्छानुसार विवाह गर्दछन् । यो जनजातीमा जीवनसाथी चुन्न केटा र केटी दुबै स्वतन्त्र हुन्छन् ।